I-VB Insight: Abahlaziyi futhi Ababizi, Imibiko Yangempela Yomhlaba | Martech Zone
UBryant Tutterow ungumakethi ohole izinkampani eziningi ezinkulu zamabhizinisi kumasu abo wokuqukethwe. Uzimisele kakhulu ngokunyusa okuqukethwe, kufaka phakathi ukukhangisa ezinkundleni zokuxhumana, lapho izinkampani asebenze nazo zithola imiphumela ehlukile naphezu kwalokho abahlaziyi abaningi abebekwenza. Sijabule kakhulu ukumemezela ukuthi uBryant uyasiza DK New Media ngokwandisa amandla wokunyusa, nawo!
Olunye lwezinsizakalo esilunikeze uBryant futhi siqhubeka nokunikeza amaklayenti ethu umxhumanisi wokuthola abathengisi. Izinkampani eziningi azinaso isikhathi noma izinsiza zokukhetha isisombululo esifanele embonini yezobuchwepheshe bokumaketha. Futhi ukwenza utshalomali lwesibalo oluyisithupha noma olungu-XNUMX ekuqalisweni, ekuhlanganisweni nasekusetshenzisweni kwesiteji esingalungile kungabiza inkampani izigidi… noma okubi nakakhulu… zibabulale ngendlala ngokulahlekelwa izinombolo zokutholwa nezokugcinwa.
Isikhalazo sikaBryant kule mboni ukuthi abahlaziyi bavame ukungatholakali futhi imibiko yabo ibiza kakhulu ukucacisa izindleko. Indaba eyiphutha ngumbiko wakamuva oshoyo AmaBrands amosha imali kuFacebook nakuTwitter - Umbiko wama- $ 499 ovela kwaForrester ochaza wonke amasu uBryant awasebenzise ngempumelelo ukukhulisa ukufunwa nenzuzo yezinkampani azisebenzelayo ukwakha ubudlelwano emphakathini inthanethi.
Manje uBryant unesisombululo ku- VB Insight!
Kwethulwa i-VB Insight
Ngobudlelwano obuhle no U-Ian Cleary, sixhume noStewart Rogers eVentureBeat. UStewart Rogers unguMqondisi, Marketing Technology kwaVB Insight, umkhiqizo weVentureBeat, esiza ukukhiqiza ukuhlaziywa kuyo yonke imboni ye-martech kanye nokusebenza nababhali abasebenzisa ipulatifomu ukuletha izifundo zabo nemibiko. VB Insight iqoqo elingabizi futhi elingabizi kakhulu lemibiko yezimboni zomhlaba wangempela, ebhalwe ngabasebenza ngokoqobo besebenzisa inethiwekhi ebanzi ye-VB yocwaningo lokuqala.
UStewart ungimemile futhi ukuba ngibe ngumhlaziyi! Sengiqale ukubhala umbiko wethu wokuqala we-Analyst VB Insight esimweni semboni yokwenziwa kwezinjini zokusesha, ebhalelwe abaphathi bezentengiso bezinhlangano zamabhizinisi. Siyethemba ukuthi sizophothulwa ekuqaleni kukaJanuwari!
Thenga Umbiko Wakho Wokuqala ngesephulelo esingu-50%!
UStewart usanda kubhala umbiko omangazayo ngomthelela wezokuxhumana kanye nokwenziwa kwamakhasimende ngezibalo ezithile ezethusayo kubantu babantu abakhononda nge-inthanethi nokuthi imikhiqizo iyisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ukuze ithuthukise insizakalo yamakhasimende ngenkathi imaketha kahle imikhiqizo yayo:
Ama-pitchforks edijithali: Ukuguqula izikhalazo zemidiya yokuxhumana nabantu kube ukunqoba komkhiqizo.
Martech Zone abafundi bangachofoza esithombeni esingezansi ukuze bathenge umbiko ngo-50% wehliselwe intengo yohlu lwayo!
[su_button url = "http://bit.ly/audpcs50 ″ target =" blank "color =" # ffffff "] Thenga Umbiko we-50% Off! [/ su_button]
Tags: umhlaziyiimibiko yomhlaziyiumfundisi we-bryanti-forresterkucacisiweama-stewart rogersvbukuzidela
Yiziphi izinkundla zokumaketha ezihamba phambili?